Tifatiraha fiidiyowga ee LosslessCut: Hadda wuxuu ku jiraa qaabkiisa cusub 2.3.0 | Laga soo bilaabo Linux
Tifatiraha fiidiyowga ee LosslessCut: Hadda wuxuu ku jiraa noocyadiisa cusub 2.3.0
Wax yar ka hor sanad ka hor, waxaan uga hadalnay barta ku saabsan «LosslessCut», tifaftire fiidiyow oo aad u fiican oo fudud, laakiin aad wax ku ool ah. Gaar ahaan qaybinta la yiraahdo "LosslessCut: Iska yaree fiidiyowyada qaab aad u fudud oo ku jira Linux". Meeshii dib loogu eegay, noocii hore ee waagaas, oo ahaa «versión 1.12.0».
Ku filan ayaa hore u soo gudbay, sannad ka dib, oo hadda la yidhi «Software Libre» tagaa waayo «versión 2.3.0». Taas oo ka dhigtay inay soo ururtay ilaa taariikhda hadda, astaamo badan oo cusub, isbedelada isku xirnaanta qabow, ciladaha cilladaha, iyo hagaajinta dalabka.
«LosslessCut» asal ahaan waa aalad iskudhaf ah oo xawaare sare leh oo iskudhaf ah oo loogu talagalay jarista luminta fiidiyowga iyo faylasha maqalka. Waxay ku habboon tahay keydinta booska iyadoo si qallafsan loo jarayo feylal fiidiyoowyo waaweyn ah oo laga soo duubay 'Camcorder', 'GoPro', 'Drone', iyo aalado kale oo badan oo duubitaan ah.
Intaas waxaa sii dheer, waxay noo ogolaaneysaa inaan si deg deg ah uga soo saarno qeybaha wanaagsan ee fiidiyowyadeena isla markaana aan ka tuurno gigabytes badan oo xog iyaga ah., iyadoon loo baahnayn in dib loogu celiyo tartiib tartiib ah sidaa darteedna, lumiyo tayada habka loo sheegay. Waa mid aad u dhakhso badan maxaa yeelay waxay ka dhigeysaa nuqul xog ah oo toos ah oo fiidiyowga la shaqeeyay ah. Inta badan tan, maxaa yeelay way isticmaashaa aaladda laga cabsado ee «Software Libre»wacid «ffmpeg», in la qabto shaqada adag.
1 Tilmaamaha Hadda
2 Nidaamyada Howlgalka ee La Taageeray
3 Ku soo dejiso oo ku rakib Linux
4 Qaabab la taageeray
5 Gawaarida kumbuyuutarka iyo hawlgalka
Sidaad sheegtay bogga rasmiga ah, Ingiriisiga, hadda astaamaha ugu caansan waa:
Samee jarid adigoon lumin qaababka ama tayada fiidiyowga iyo maqalka la shaqeeyay.
Ku guuleysta dib-u-biir la'aanta qaybaha fiidiyowga.
U oggolow isku biir la'aanta feylasha aan loo baahnayn (oo leh koodhadh isku mid ah).
Ku fuliso soo saarid la'aanta dhammaan durdurrada xogta ee faylka (fiidiyow, maqal, cinwaanno, kuwa kale).
Qaado sawir qaadasho xallin buuxda oo fiidiyowyo ah qaabka JPEG / PNG.
Adigu gacanta ku farsamee gashiga waxyaabaha laga gooyey qaybaha fiidiyowga ee lagu shaqeynayo.
Ku dar in ka badan 2 taxane ah ama tirtir dhawaaq maqal ah (ikhtiyaar).
Codso lambarka koodhka waqtiga.
Beddel metadata wareegga / hanuuninta fiidiyowyada. Aad ugu fiican wareejinta fiidiyowyada taleefanka si qaldan loo soo saaro iyada oo aan dib loo sixin fiidiyowga.
Nidaamyada Howlgalka ee La Taageeray
Hadda, «LosslessCut» waxay taageertaa Nidaamyada Hawlgalka ee soo socda:
Windows (64 / 32bit)
Linux (64 / 32bit)
Ku soo dejiso oo ku rakib Linux
Ka dib markii aad ku soo dejiso qeybta soo dejinta ee bogga rasmiga ah GitHub, asal ahaan waxay u baahan tahay oo kaliya in la furo oo lagu hoos galo faylka la fulin karo ee loo magacaabay «LosslessCut».
Qaabab la taageeray
Tan iyo markii «LosslessCut» waxay ku saleysan tahay Chromium waxayna isticmaashaa fiidiyaha fiidiyowga «HTML5», mahan dhammaan qaabab ay taageerto ffmpeg si toos ah ayaa loo taageeri doonaa. Noocyada soo socda / koodhadhka waa inay guud ahaan shaqeeyaan: «MP4, MOV, WebM, MKV, OGG, WAV, MP3, AAC, H264, Theora, VP8, VP9». Sidaa darteed, si loo helo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qaababka la taageeray iyo koodhadhka, ilaha laga heli karo iskuxiraha soo socda waa in lala tashado: Chromium: maqal-muuqaal ah.
Faylasha aan la taageerin waa la isku dhajin karaa (dhakhso) ama loo qaabeeyaa (gaabis ah) qaab qaab / koodh ah oo waafaqsan Nidaamka Faylka. «LosslessCut» wuxuu fureyaa qaab la soo rogay oo faylka kujira ciyaaryahanka. Hawlgallada goynta ayaa sii wadi doonta iyadoo la adeegsanayo feylkii asalka ahaa markii la gelinayo, sidaas darteedna ma lumin doono. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad furto feylal kasta oo ffmpeg uu awood u leeyahay inuu kaligiis furto.
Gawaarida kumbuyuutarka iyo hawlgalka
Qaabkan cusub interface ka «LosslessCut» waxay leedahay liis fudud oo dhammaystiran oo ikhtiyaarro ah, laakiin toobiye-keedyadeeda dhaqameed ee wali la sii keydiyey kaas oo lagu fulinayo ficilada edbinta fiidiyowga ee soo jireenka ah. Tilmaamaha Khariidadaha hadda jira ee codsigu oggolaado waa:
Furaha«h» si loo muujiyo ama loo qariyo liiska caawinta.
Furayaasha «CTRL+O» in la furo shaashadda galka faylka. Waxa kale oo aad jiidi kartaa file video ah ciyaaryahanka si ay u soo shuban.
Furaha «SPACE» iyo / ama «k» si aad uhesho / u hakiso fiidiyow. Waxaad sidoo kale gadaal / gadaal ugu soconkartaa adigoo adeegsanaya astaamaha «◀ ▶» .
Furayaasha «i» e «o» si loo doorto bilowga iyo dhamaadka waqtiga goynta qeybta goynta. In kabadan hal qeyb jeex, furaha waa in la riixaa. «+» ama badhanka «c+» in lagu daro qayb kale, oo sii wad xulashada qaybta (yada) xigta ee loo baahan yahay.
Si aad isugu milmaan dhammaan qaybaha la xushay ka dib goynta, waa inaad riixdaa badhanka «nm» (aan la qarin) si loogu beddelo «am» (iskudhis otomaatig ah). Tani waxay waxtar u leedahay jarista qaybo ka mid ah fiidiyowga (xulashada wax walba marka laga reebo qaybaha aan loo baahnayn).
Si aad ugu dhoofiso fiidiyowga la farsameeyay diiwaanka gaarka ah, riix batoonka galka wax soo saarka la habeeyay, oo loo aqoonsaday inuu yahay «id». Sida caadiga ah, galka wax soo saarka ee fiidiyowga la shaqeeyay wuxuu la mid yahay feylka galinta.
Haddii aad rabto inaad ka takhalusto metadata jihada, riix badhanka wareega, oo loo aqoonsaday inuu yahay «_°».
Si aad u dhoofiso qayb qeexan, waa inaad riixdaa badhanka lagu aqoonsaday sawirka «tijera» ama fure «e».
Si aad u qaadatid shaashad (sawir), waa inaad riixdaa badhanka lagu aqoonsaday sawirka «cámara» ama fure «c».
Si aad ugu dirto faylka asalka ah qashinka, waa inaad riixdaa badhanka lagu aqoonsaday sawirka «papelera».
Bilaash Video Cut
Shakhsiyan, waxaan kugula talinayaa LosslessCut kuwa aan khabiir ku ahayn tafatirka fiidiyowga. Ma aha oo kaliya inay fududahay soo dejinta iyo socodsiinta, laakiin sidoo kale way fududahay in loo isticmaalo dhulal badan oo ka hawlgala nidaamyada hawlgalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Tifatiraha fiidiyowga ee LosslessCut: Hadda wuxuu ku jiraa noocyadiisa cusub 2.3.0
Waxay umuuqataa mid xiiso leh. Waxaan ku guuleystey inaan ku ordo anigoo laba-gujinaya galka aad ka soo dejiso shabakadda. Laakiin barnaamijka laguma darin menu-ka 'distro menu'. Ceeb Xaqiiqdii gacanta ku hayso barnaamij sida alacarte ama wax la mid ah, laakiin waa inaad gacanta ku qabataa.
Ku jawaab arazal
Salaan Carazal. Xaqiiqdii, iyada oo is-fulin kara, kuma dhexjirto nidaamka OS-ga. Taasna waa inay u dhisaan sidii AppImage. Taas oo fiicnaan laheyd.
Xafiiska WPS 2019: Beddelka Casriga ah ee LibreOffice
FFmpeg 4.2 "Ada": sii deyn cusub oo war muhiim ah leh